यी अमेरिकी राष्ट्रपति ९५ वर्षकाे उमेरमा गरीबका लागि घर बनाउँछन्
आश्विन १६ गते, २०७६ बिहिवार
3rd October, 2019 Thu १९:४४:१४ मा प्रकाशित
एजेन्सी । पचास बर्ष कटे पछि बुढाे भएँ भन्ने नेपालीहरूका लागि याे एक व्यङ्ग्य हुन सक्छ । नेपाली नेताहरूमा सरकारी अाेहाेदामा बसेपछि अाजीवन सुबिधा लिने प्रवृति कुनै नाैलाे बिषय हाेइन् । जनताकाे करबाट उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू अाजीवन सुविधा लिने र देश विकासका लागि हुने खर्च उनीहरूकाे पालनपाेषणमा भएपछि देश अधाेगति गएकाे हाे।
अमेरिकाका यी बुढा राष्ट्रपति भने अाफ्नाे पिण्ड खाने उमेरमा पनि हातमा ड्रिल मेसिन लिएर गरीबकाे घर बनाउन निश्किएका छन् । सन् १९७७ देखि सन् १९८१ सम्म अमेरिकाकाे राष्ट्रपति रहेका जिमी कार्टर गएकाे मंगलबार ९५ वर्षका भए । यही अवसरमा उनी जर्जिया राज्यमा रहेकाे उनकाे निवासमा कुनै अाैपचारिक कार्यक्रम भएन र केक पनि काटिएन ।
जिमी याे उमेरमा पनि कुनै थकावट बिना गरीबहरूका लागि खटिरहेका छन् । उनी र उनकी पत्नि राेजलिना अमेरिका, एसिया र अफ्रिकाका कयाैं देहरूमा पछिल्ला ३६ वर्षदेखि हजाराैं गरीबका लागि घर बनार्इ सकेका छन् । कार्टर अाफ्नाे जन्म दिनकाे सिलसिलामा अघिल्लाे हप्ता एक अावास निर्माण कार्यक्रममा सामेल भए ।
१ अक्टुबर, १९२४ मा जन्मिएका कार्टर अाज अमेरिकाकाे इतिहासमा सबैभन्दा धेरै उमेर बाँचने राष्ट्रपति हुन् । उनी भन्दा पहिले जर्ज एच. डब्लु. बुश धेरै बाँच्ने राष्ट्रपति थिए । बुश गत वर्षा नाेभेम्बरमा ९४ वर्षकाे उमेरमा निधन भएकाे थियाे । कार्टरले यही वर्षकाे मार्चमा बुशकाे रेकर्ड ताेडेका हुन् ।
अध्यक्ष प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाललाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि
मिनी बसमा बम हमला गरी ७ जनाको हत्या
बालकुमारी मन्दिरबाट करिब तीन सय वर्ष पुरानो मूर्ति चोरी